Vhiki rekuyedza pakati peEpic Games neApple. Pfupiso yezviri kuitika | Ndinobva mac
Manuel Alonso | 11/05/2021 19:00 | Noticias
Pakupedzisira May 3, Kutongwa pakati peEpic Games neApple kwakatanga. Izvo zvese zvakatanga apo mugadziri wemutambo wevhidhiyo akafunga kutyora mitemo yeApp Store uye nesarudzo dzavakaita kubva kuApple posteriori, vakatotadza account yavo yekuvandudza. Tatova nazvo vhiki rekuyedzwa uye ichi ndicho chinonyanya kunakidza mumazuva ano.
1 Magweta eApple atora mazuva maviri ekutanga ekutongwa kumunda wemichero
2 Kubva pazuva re3 kusvika ku5 rekuyedzwa pakati peEpic Games neApple, chinhu hachina kunge chakakosha zvakadaro
Magweta eApple atora mazuva maviri ekutanga ekutongwa kumunda wemichero
Izvo zvese zvakatanga nekuzivisa kwemakambani ese ari maviri. Nharo dzekutanga, mumwe nemumwe achidzivirira chinzvimbo chake pamberi pemutongi wenyaya. Epic yakanangana nekuratidzira Apple neApp Store senge monopolistic uye inopesana nemakwikwi ecosystem iyo isingape mabhenefiti kune vatengi vanosimudzirwa naApple. Iyo kambani yekugadzira yakaratidza maemail mazhinji akatumirwa naSteve Jobs, Craig Federighi, Luca Maestri, Tim Cook, Eddy Cue naScott Forstall vanotaura nezvekuvakwa kweApple yezano rekuvaka. madziro asingakundike kune vamwe vese.
Tim Sweeney, CEO weEpic, akapupura nezve modhi yebhizinesi yekambani yake, hukama nemakambani akaita seMicrosoft uye Sony, nezvimwe. Chokwadi chinonakidza Zvakaitika apo Sweeney akabvuma kuti anoshandisa iPhone nekuda kwekutarisa kweApple pane zvakavanzika uye chengetedzo mukupindura mibvunzo kubva kumagweta eApple.
Magweta eApple, kune rimwe divi, akatarisana ne kubatsirwa kwavanopa kune vanogadzira pamapuratifomu avo. Izvi zvinosanganisira kuwanikwa kweimba yeApple yezvivakwa, senge dzakasiyana siyana dzeAPIs uye zvekuvandudza zviwanikwa. Vainyanya kufunga nezvekushandiswa kweEpic kweiyo Metal graph API. Iyo kambani yakaratidza mukati maemail kubva kune Epic manejimendi achirumbidza Metal. Muna 2018, Epic yakapawo kota yeWWDC, pachikumbiro chaApple, ichirumbidza Metal.
Asi kiyi inowanikwa mumubvunzo unotevera uye mhinduro:
Gweta reApple: Dai Apple yakakuudza kuti vaizokupa chibvumirano uye hapana mumwe mugadziri, Ndingadai ndakaigamuchira here?
Sweeney: Hongu, ndingadai ndakadaro.
Sezvavanotaura, Hakuchina mimwe mibvunzo, Changamire.
Kubva pazuva re3 kusvika ku5 rekuyedzwa pakati peEpic Games neApple, chinhu hachina kunge chakakosha zvakadaro
Chinhu chakashata ndechekuti Apple yakazviwana iri pakati pebwe nenzvimbo yakaoma kuyedza kudzivirira Netflix Mira Kutsigira In-App Kutenga paApp Store. Tambo yeemail yakaratidza kutaurirana kwemukati kuApple kana kambani yaziva nezvezvirongwa zveNetflix. Vatungamiriri veApple mune tambo yeemail vakaronga dzakasiyana siyana misangano neNetflix yekukurukura bvunzo dzakarongwa nekambani.
Pazuva rechina vakatanga kuve nemukurumbira zvimwe zvapupu:
El Mutevedzeri weMutungamiriri weApp Store Akatsanangura kuti Apple yakagara yakanangana nechengetedzo yechitoro uye yakaratidza mazano pazvinhu senge dzimwe nzira dzekubhadhara uye kurodha maapplication. Mutongi Rogers akaramba kuenderera mberi kwekuedza kwaEpic kubvuma mamwe magwaro seumboo, zvichibva pazvinhu zvakaita sekukosha uye magwaro anonongedzera mapato echitatu. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika nemagweta ake vaidzivirira kubvuma izvozvo zvimwe zvemukati Apple kutaurirana semuyedzo. Chimwe chinhu icho pasina mubvunzo chinouya chinobatsira kune iyo apple kambani.
Pazuva rekupedzisira rekushanda kwekutongwa asi pachine huni zhinji dzakasara, Trystan Kosmynka, zvakadzama kuti zvinosvika mamirioni mashanu ekunyorera zvinotumirwa kuApp Store gore rega uye izvo chiyero chekuramba kunyorera chiri pasi pe40%. Mu2019, 4.808.685 maapplication akaendeswa kune iyo App Store kuongorora maitiro, uye 36% yadzo yakarambwa. Pamapurogiramu akarambwa aya, vangangoita mazana maviri nemakumi maviri nemashanu vakatyora nhungamiro yeApple yekuvanzika.
Parizvino "chicha" diki asi haisati yabata mabara makuru emakambani ekuenda kunozivisa. Tinoramba takangwarira nekuti kuyedzwa uku inogona kuchinja zvakawanda paApple uye saka kune vashandisi vemaapuro zvishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Vhiki rekuyedza pakati peEpic Games neApple. Pfupiso yezviri kuitika
Batanidza iyo AirTag kune iyo Siri Remote pane Apple TV kana iwe uine 3D printa